चौरसीयाले मतदातासँग भने - 'कांग्रेसले बहुमत ल्याए मधेशको माग सम्बोधन हुन्छ'
प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक २९ बुधबार , ३,५०४ पटक हेरिएको
विरगंज। पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार एवम् पुर्व मन्त्री अजयकुमार चौरसीयाले नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याए मधेशको माग सम्बोधन हुने बताएका छन् । चौरसीयाले वीरगंज महानगरपालीकाको वडा नम्बर ९ मा घरदैलो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार चौरसीयाले कांग्रेसले उम्मेदवारहरुलाई आफ्नो अमुल्य मत दिएर विजयी गराउन मतदातासँग आग्रह गरे। मधेशको मुद्दा कांग्रेसले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने भएकाले पनि कांग्रेसलाई जिताउन उम्मेदवार चौरसीयाले मतदाताहरुसंग आग्रह गरे।
चौरसीया र क्षेत्र नम्बर २ को ख बाट प्रदेश सभा उम्मेदवार रामरुप कुर्मी सहितको टोलीले वीरगन्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका हुन । वीरगंजको घण्टाघरबाट कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका उम्मेदवार चौरसीयाको नेतृत्वमा निकालीएको घरदैलो कार्यक्रममा स्थानियको उल्लेखनिय सहभागिता रहेको थियो ।
घर दैलो कार्यक्रममा ९ नम्बर वडाका बुथ सभापती जवाहरलाल रौनियार, महाधिवेशन प्रतिनीधी मनोज साह, बहुदरामाई नगरपालिकाका मेयर नितेन्द्र प्रसाद साह, महाधिवेशन प्रतिनिधी अशोक कुमार गुप्ता लगायत स्थानीयहरुको उल्लेखनिय सहभागिता रहेको थियो ।
एकताबद्ध भई सशक्त ढंगले अघि बढ्ने कांग्रेसको संकल्प
काँग्रेसको चार दिने हेटौंडा भेलाले जारी गर्यो २१ बुँदे घोषणापत्र, के के हुन् ती ?
काँग्रेसमा निर्वाचन गर्ने कि तदर्थ समिति बनाउने भन्नेमा मतान्तर, को कता लागे?
कांग्रेस नेता भट्टराईलाई मस्तिष्कघात, नर्भिकमा उपचार हुँदै
आठ नेताको एउटै लिखित प्रस्ताव - कांग्रेसलाई डोर्‍याउने नेतृत्वका लागि महासमिति बैठक
काँग्रेस जिल्ला सभापतिको बन्द सत्र जारी, नेतृत्वको ‘जमेर’ आलोचना
काँग्रेसका आठ युवाले जिल्ला सभापतिहरुलाई बुझाए ५४ पृष्ठ लामो पत्र, काँग्रेस रुपान्तरणलाई उर्जा [पूर्णपाठसहित]
गुरुले शशांकलाई भने ‘तपाईले विश्वप्रकाश र गगनलाई किन बोल्न दिनुभएन ?’
काँग्रेस सभापति भेलामा फरक मतलाई रोक्ने प्रयास भएको आरोप